Ady amin’ny varotra fanafody eny amoron-dalana Adidin’ny rehetra, hoy ny minisiteran’ny fahasalamana
Mirongatra hatrany ny varotra fanafody tsy ara-dalàna eny amoron-dalana eto amintsika. Anisan’ny tena malaza ary toerana fandehanan’ireo marary mila fanafody na mitsabo tena maharitra ny eny Ambohipo ka raha vantany vao mandalo ny olona iray dia efa misy manontany.
Tsy voafehy intsony i Maroantsetra Vaky indray ny fonja
Tsy milamina akory ny raharaha momba ny gidragidra nahafaty olona roa noho ny savorovoron’ny vahoaka sy ny polisy, niampy fahamaizana trano miisa 22 ny takarivan’ny sabotsy 6 aprily teo,
Fanjakana sy ny mpitsara Raikitra koa ny gidragidra…
Tsikaritra ny ady mangatsiaka eo amin’ny fanjakana sy ny mpitsara amin’izao fotoana izao, ary manomboka vaky ambatolampy.
Mpiasan’ny fananan-tany Hiasa sady hitolona
Nanova paikady hahafahana mangataka ny famoahana ny tale jeneraliny nampidirina am-ponja vonjimaika ireo mpiasan’ny fananan-tany rehetra etsy Anosy.
Trano miorina etsy Anosy Nandefa taratasy fitarainana ireo mpivarotra voninkazo
Tafiditra ao anatin’ny tsenan’Ambohijatovo ny tsenam-boninkazo etsy Anosy. Nanana olana anefa ireo mpivarotra ao an-toerana nanomboka ny 23 martsa alina lasa teo.
Any amin’iny faritra avaratry ny Nosy iny ahitana ny Faritra SAVA sy DIANA no mety hisy ranon’orana amin’ny sabotsy sy alahady ho avy izao saingy na izany aza tsy ho be dia be. Noho ny hakelezan’ny velaran’ity rivodoza Alcide ity no fantatra fa antony. Mianatsimo andrefana ny lalan’ity rivodoza ity nanomboka omaly hariva ary tsy mbola misy fiantraikany eto Madagasikara ny heriny. Tsiahivina fa 11 km isan’ora ny hafainganam-pandehany omaly hariva, mitondra tafiotra 165 km isan’ora.